कसरी पेन्सिलको साथ गुलाब कोरउने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कसरी पेन्सिलको साथ गुलाब कोरउने?
पेन्सिलको साथ गुलाब तान्न त्यति गाह्रो छैन। गुलाब सबैभन्दा सामान्य फूल हो।
यो गर्न, निम्न कार्य गर्नुहोस्।
E चित्रकारी गर्न सकिन्छ, उदाहरणको लागि, उज्यालो रातोमा।
गुलाब धेरै सुन्दर फूल हो। गुलाब कोर्नुहोस् निम्न तरिकामा।
हामी दुई सर्कल र गुलाबको काण्ड बनाउँछौं।
हामी कली र पातहरू चित्रण गर्न थाल्छौं।
हामी कली र पातहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
नरम पेन्सिलका साथ सबै लाइनहरू ल्याउनुहोस्, छाया थप गर्नुहोस्।
यस सुन्दर फूल कोर्न कोसिस गरौं? हामीले सुरु गर्यौं। कोपिला र काण्डको कंकालबाट सुरू गरेर, मलाई लाग्छ कि यो धेरै गाह्रो हुनेछैन
अर्को, हामी फूलको कोपिला र यसको स्टेम समाप्त गर्दछौं
खैर, के भयो? पंखुडी र पातहरूको आधार पेन्ट गर्नुहोस्
अब गुलाबका पंखुडीहरू कोर्नुहोस्
खैर, त्यो हो, कोरिएको पातहरू कोर्नुहोस्
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ रizeमाउन सक्नुहुन्छ र रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ कि यो यति राम्रो भयो।
गुलाब एकदम सुन्दर फूल हो, यो कुनै पनि कार्डमा अद्भुत देखिन्छ, त्यसोभए गुलाब कसरी कोरउने?
तपाईं चरणहरूमा पेन्सिलको साथ यस्तो गुलाब कोर्न सक्नुहुन्छ:
पहिले हामी स्पाइकको साथ एउटा स्टिक तान्दछौं
त्यसपछि तीन पातहरू थप्नुहोस्
चारवटा पंखुडीहरू कोर्नुहोस्
हाम्रो गुलाब अधिक विवरण कोर्नुहोस्
यहाँ पेन्सिलको साथ गुलाब रेखाचित्रको साधारण उदाहरण दिइएको छ।
र यहाँ पेन्सिलको साथ गुलाब चित्रण गर्नुको सट्टामा गाह्रो काम हो। यद्यपि यो गुलाब मात्र अद्भुत छ।
तपाईं एक हास्यास्पद कार्टुन गुलाब चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ:
यहाँ पेन्सिल ड्रइ ofको अर्को साधारण संस्करण छ:
तर यस साइटमा चित्रका लागि धेरै भिडियो विकल्पहरू छन्।
एक पेन्सिलको साथ गुलाब ड्र? गुलाब सुन्दर फेर्न र प्राकृतिक देखिनका लागि तपाईले यसको संरचना याद गर्नु आवश्यक छ, जस्तै, कसरी पंखुडीहरू कपालमा अवस्थित छन्। उदाहरणको लागि, गुलाबको फोटो प्रयोग गर्नुहोस्:
एक तर यो फूलको सौन्दर्य प्रशंसा गर्न सक्दैन!
र यसैले हामी चरणहरुमा पेन्सिलको साथ गुलाब कोर्न शुरु गर्दछौं।
पहिले, अंडाकार र वृत्तको रूपमा लेआउट कोर्नुहोस्, २ ठाडो लाइनहरू कोर्नुहोस्:
अंडाकारको बीचको बीचबाट, कोप्टो चित्रण गर्न सुरू गर्नुहोस्:
अब पातलहरू कोर्नुहोस्:
ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र रेखाचित्र योजना दोहोर्याउनुहोस्:
रेखाचित्र अनुसरण गर्दै, स्टेम र पातहरू कोर्नुहोस्:
खैर, हाम्रो गुलाब तयार छ। रंगीन पेन्सिलहरू लिनुहोस् र गुलाबलाई रंग दिनुहोस्, माथिको फोटोमा हेर्नुहोस्:
म तपाईको सफलताको कामना गर्दछु!
दुर्भाग्यवश मसँग गुलाबको केवल र color्ग रेखाचित्र छ, थ्रीडी ग्राफिक्सको शैलीमा केहि चित्रित गर्ने यो पहिलो प्रयास हो, साधारण पेन्सिलको साथ यसले लामो समयसम्म काम गरिरहेको छैन। यो ज्ञानीको भन्दा गुलाबजस्तो देखिन्छ, यद्यपि उनले आफैंलाई तानिनन, तर समाप्त योजना लिए। म शब्दमा भन्न कोशिस गर्दछु कसरी गुलाब कोरउने। पहिले तपाईंले एक जीवित फूललाई ​​विचार गर्नुपर्छ। त्यसोभए एकसँग जोडिएर मुड्किएको पत्तीको बीचबाट चित्र बनाउन सुरू गर्नुहोस्। दोस्रो पंखुडी थोरै खुला छ, तेस्रो पक्षीय को माथिल्लो भाग को एक सानो झुकाव संग चित्रित छ। प्रत्येक पछिको पंखुला केही अलि ठूलो बनाइएको हुन्छ, यसको केन्द्रबाट झुम्काएर र किनारमा हल्का मोर्चाको साथ। हामी अन्तिम पंखुडीहरू पूर्ण रूपमा खुला बनाउँदछौं, सानो खाली स्थानको साथ, किनकि तिनीहरूले पहिले खोले र थोरै फ्राई गरे भने))) त्यसो भए हामी सिप्पल, डाँठ, पातलो हाँगा र काँढाको चित्र कोर्दछौं ...
पेन्सिलको साथ गुलाब तान्न धेरै तरिकाहरू छन्, म ती मध्ये एक प्रस्ताव गर्नेछु।
पहिले एउटा गोलो बनाउँनुहोस्, त्यसपछि यसको केन्द्रबाट पंखुड़ीले प्वालहरू झिक्नुहोस् र फूल तयार भएपछि हामी पातहरू तर्दछौं र त्यसपछि र color्ग पार्दछौं।
गुलाब सबैभन्दा सुन्दर फूल मात्र हो, तर सबैभन्दा जटिल - धेरै पंखुडीहरू, एक अर्कोमा। यो सुन्दर फूल कोर्नु केही गाह्रो छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सधैं कठिनाइहरू भएको छ। तर यदि तपाईं निश्चित क्रममा क्रमशः यो चरण गर्नुभयो भने, तब सबै कुरा बाहिर जान्छ, अझ राम्रो, राम्रो। म केही तरीका सुझाव दिन्छु कसरी चरणहरूमा गुलाब कोर्ने:
पेन्सिलको साथ सुन्दरताले गुलाब बनाउन, एक पेशेवर कलाकार हुनु आवश्यक छैन। इन्टर्नेटमा, त्यहाँ पेन्सिलको साथ गुलाब चित्रण गर्न धेरै भिडियो निर्देशनहरू छन्। म ती मध्ये केही तपाईंको ध्यानमा ल्याउँछु। त्यसोभए राम्रोसँग शार्प गरिएको साधारण पेन्सिल तयार गर्नुहोस् र जानुहोस्। तपाईं सफल हुनेछ। शुभकामना
गुलाब एक सुन्दर र मनमोहक फूल हो जुन रंग्न सबैलाई मन पर्छ। तपाईं यसलाई बिभिन्न तरीकाले तान्न सक्नुहुन्छ, तर प्राय जसो केसहरूमा यो सहजै गरिन्छ र धेरै समय लिदैन। उदाहरणको लागि, तपाईं यस्तो गुलाब कोर्न सक्नुहुन्छ।
हामी फूलको अंडाकारबाट आफैंले चित्रण गर्न थाल्छौं र बिस्तारै पंखुड़ियों कोर्दछौं।
र यहाँ केहि अधिक चाखलाग्दो र धेरै सरल विकल्पहरू छन्।
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,555 प्रश्नहरू।